Besca sika Steel & Qeda
Dip Zezıhlabane lashukumisa
Insimbi Ibanga 304 noma 316
Mill Steel kuchazwa njenganoma steel ngaphandle kokwelashwa. Kuyefana "steel black". Kusho ukuthi akukho sekugcineni ebusweni welashelwa phezu steel. Ngokuvamile izakhi anti-corrsion izongezwa isigayo steel ukuze awuvikele ngokumelene endaweni ezonakalisayo lapho izofakwa.
Hot Dip Steel lashukumisa
kwakhiwa Zezıhlabane Dip Steel lashukumisa is e inqubo lokunameka yensimbi steel ungqimba zinc ngu ngibhapathiza kwensimbi in a okugeza zinc oncibilikisiwe ezingeni lokushisa emhlabeni 840 ° F (449 ° C). Nge cwilisa hot galvanizing ukwelashwa, surface steel zangaphambi lamanga sika ngokuphelele embozwe zinc elingenamikhono.
Okufanayo nezinye izinhlelo ukuvikelwa ukugqwala, hot idiphu galvanizing kuvimbela steel kude ukugqwala, futhi Unjengomahluleli umgoqo phakathi steel nasemkhathini.
imikhiqizo lashukumisa cwilisa ashisayo Besca sika bayakwazi ukusebenza kahle ezimweni ongaphandle enamathela years.since yabo ejwayelekile ihlangabezana NJENGOBA / NZS4680: 2006, alinikela kubo Ukuvikelwa isikhathi eside ezindaweni eziningi ngaphandle noma ezimbonini.
Oku Steel lashukumisa
Oku Steel lashukumisa kukhona isigayo lezinsimbi ukuthi baye baphathwa nge cwilisa hot lashukumisa sekugcineni ngaphambi kokuba ekhiqizwa ku imikhiqizo steel.
Oku Imikhiqizo lashukumisa Site ezindaweni zasendlini, ezomile, evamile noma ngobumnene ezonakalisayo, ne-zinc enamathela 1/3 ye cwilisa ashisayo zinc lashukumisa enamathela. Sinenkosi ukubukeka ehlanzekile futhi isebenza kahle ikakhulukazi endaweni zasendlini.
Engagqwali Ibanga 304
Insimbi engagqwali sihlukile kwesama-carbon steel by inani chromium samanje. Ibanga 304 okuhlala isikhathi eside futhi anti-ukugqwala, futhi ngokuvamile kulungele ukusetshenziswa izicelo yokukhiqiza. Ngokusebenzisa Engagqwali 304, indaba kuvimbela okwengeziwe ebusweni ezibangelwa ukugqwala by ivimbela i-oksijini okusheshayo kuya steel ebusweni iphinde ivimbele ukugqwala angehleli ku Sakhiwo sangekhatsi kwensimbi sika.
Engagqwali Ibanga 316
Engagqwali Ibanga 316 owenza kangcono kunaye ukugqwala ukumelana kuka-Grade 304 futhi iqukethe eyengeziwe 2% molybdenum for ephakeme ukumelana ukugqwala.
Lapho Sikhathazekile isikhathi eside inkonzo nokuphila okuphakade anti-ukugqwala, Grade 316 kuwukukhetha kuqala. Kuyinto efanelekayo ukudla Ukukhiqiza amakhemikhali izitshalo, ezindaweni zasolwandle kanye eziphindwe bangcolile.
Zinc Plated Steel iyasetshenziswa imikhiqizo steel nge enamathela zinc. Ihlukile galvanizing, ukushuba zinc enamathela lingaphansi kuka galvanizing futhi kungaqali metalurgically isibopho ne steel. Nokho, kusenzima kukho okuhle ngokuba imikhiqizo encane efana fasteners. It unikeza enamathela jikelele futhi ithola smoothie futhi ukubukeka shiny ahlanzekile.
Powder Steel Camera
Powder Steel Camera ivumela imikhiqizo ucacise ngokwabo ngendlela anemibala, esiza ukwakhiwa ngendlela ephelele zokubonwayo umsebenzi wokwakha. I steel embozwe enamathela eqinile kodwa bushelelezi ngemibala ehlukene. Besca inikeza yonke imibala powder enamathela ikhebula emathileyi.